Qiimaha Chelsea ay ku soo ceshaneyso Eden Hazard oo shaaca laga qaaday – Gool FM
Qiimaha Chelsea ay ku soo ceshaneyso Eden Hazard oo shaaca laga qaaday
(London) 12 Okt 2021. Tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa ka dhawaajiyay arrinta ku saabsan soo laabashada Eden Hazard iyo inaysan noqon doonin kaliya dareen qiiro leh, laakiin ay wax badan ka tari karto weerarka Blues, maadaama uu ku tilmaamay inuu weli yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka.
Milkiilaha Chelsea Roman Abramovich ayaa hoggaaminaya baadi goobka loogu jiro in Eden Hazard si lama filaan ah uu ugu oo soo laabto kooxda ka dhisan Galbeedka London.
Sida laga soo xigtay shabakadda El Nacional ee dalka Spain, Chelsea ayaa wadahadalo aan rasmi ahayn la yeelatay madaxweynaha Real Madrid Florentino Pérez, laakiin ma bixin doonaan wax ka badan 40 milyan oo euro si ay u soo celiyaan 30 jirka reer Belgium.
Wargayska ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ay dhici karto in ay Chelsea bixiso dalab lacageed lagu daray daafaca reer England ee Reece James si ay ugu fududaato soo celinta xiddiga reer Belguim.
Wargeyska L'Equipe oo shaaciyey Magacyada SHAN ciyaaryahan ee ku guuleysan kara Abaal-marinta Ballon d'Or 2021
Ronaldo oo rikoor kale u dhigay ciyaaraha qarammada kubadda cagta